Maxay ka dhigan tahay inuu Farmaajo isku noqday Madaxweynaha & Ra'iisal wasaaraha shirka Dhuusamareb 3? | Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Siyaasiyiinta kasoo jeeda Beesha Hawiye ayaa shaki ka muujiyey sida Madaxweyne Farmaajo u daahiyey magacaabista Ra’iisal Wasaaraha cusub, kadib markii ay dhacday xukuumadii Xasan Cali Kheyre.
Isagoo aan magacaabin Ra’iisal wasaare ayuu Madaxweyne Maxamed C/llaahi Farmaajo si degdeg u tegay Magaalada Dhuusamareeb, isagoo noqday mas’uulkii ugu horeeyay ee shirka Dhuusamareeb 3 iska xaadiriya, taasoo sii badisay shakigii laga qabay in ujeedka Madaxweynaha uu yahay inuu keli ku noqdo awoodda, iskuna heysto xilalka Madaxweynaha iyo Ra’iisal wasaaraha.
Shirarka xaaladda kala guurka ah waxaa caado u ahayd inay ka wada qeyb galaan madaxda dowladda ugu sareysa ee lagu soo doortay awood qeybsiga 4.5 iyo madaxda maamul Goboleedyada laakiin waxaa hadda awoodii dowladda oo dhan isku haya Madaxweynaha kaliya.
“Farmaajo wuxuu inkiray jiritaanka Aqalkii sare, kaalintii ay wakiilka kaga ahaayeen Dowlad Goboleedyadana wuxuu siiyey Golaha Shacabka. Wuxuu sidoo kale ku xadgudbay awood qaybsigii siyaasadeed, kaddib markii uu diiday in uu magacaabo Raysal wasare soo dhisa xukuumad xilliga kala guurka hoggaamisa. Hadalkiisana wuxuu ahaa aniga ayaa labadiiba isku ah…” ayuu yiri Siyaasiga C/raxmaan C/shakur Warsame oo ka fal celiyey khudbadii Farmaajo ka jeediyey Golaha Shacabka intii aanu u duulin Dhuusamareeb 15 Ogost 2020.
Inuu Madaxweyne Farmaajo xilligan isku yahay Madaxweyne iyo Ra’iisal wasaare waxay halis ku tahay shirka Dhuusamareeb 3 oo madaxda maamul Goboleedyada ay wajihi doonaan Farmaajo ka adag shirarkii Dhuusamareeb 1iyo 2 oo heshiisyadii lagu gaaray aanu waxba kasoo qaadin.
Maamulka Puntland ayaa soo saaray shuruudo ay tahay in la fuliyo inta aanay ka qeybgelin shirka Dhuusamareeb 3, waxaana ka mid ahaa inuu magacaabo Ra’iisal wasaare fuliya heshiisyada lagu gaaro shirka.
Puntland iyo Jubbaland oo u muuqda inay fahmeen qorshaha Madaxweyne Farmaajo ayaa ka caga jiidaya inay tagaan shirka Dhuusamareeb 3, taasoo keeni karta inuu waqtiga magacaabidda Ra’iisal wasaaraha ka dhammaado Madaxweyne Farmaajo, kadibna ku qasbanaado inuu magacaabo ama inuu Golaha Shacabka ku laabto ayna sii socoto xaaladii iska-daba wareegga iyo isla meereysiga ahayd.
Waxaa xaaladda uga sii daraya waqtiga kasii dhammaanaya hay’adaha dowladda oo uu ugu horeeyo Baarlamaanka, waxaase muuqata in Madaxweynaha u daneynayo inay xaaladu isku sii cakirnaato oo sida rajadiisu tahay la ogolaado muddo kordhinta uu dadaalka ugu jiro.
Previous articleC/raxmaan C/shakur oo Madaxweyne Farmaajo ugu baaqay inuu xilka ka qaado Fahad Yaasiin
Next article“Marnaba laga aqbali maayo inay maalin Kursiga sharci darro kusii joogaan..” Digniin ka timid Sheekh Shariif